Homeसमाचारमदनकृष्ण श्रेष्ठसहित परिवारका पाँच जनामा कोरोना सं’क्रमण
April 19, 2021 admin समाचार 5489
कलाकार म’दनकृष्ण श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। श्रेष्ठसहित उनका परिवारका पाँच जनामा सोम’बार कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। श्रेष्ठले आफू’सहित परिवारका सदस्यहरूमा संक्रमण देखिएको फेसबुकमार्फत् जानकारी गरा’एका छन्। मलगायत छोरा, छोरी, बुहारी र नातिनी पाँचै जनालाई कोरोना पोजेटिभ देखि’एको छ,’ उनले भनेका छन्।
साथै उनले कोरोना ला’गेपछि सास्ती हुने उल्लेख गरेका छन्। कोरोना भइसकेपछि सास्ती हुने रहेछ त्यसैले यो भाइ’रसलाई खेलाँची नगर्नु होला,’ उनले भनेका छन्, ‘जति सकिन्छ कोरोनाबाट सतर्क रहनु होला।’श्रेष्ठको आज जन्म’दिन पनि हो। उनले जन्मदिनमा शुभकामना दिने सबैलाई ध’न्यवाद दिएका छन्।
यो पनि, मिस सरिताको ‘महिला र दमनचक्र’ उपन्या’सलाई यस वर्षको साहित्य’तर्फको नोबेल पुरस्कार दिइएछ नि!’ उत्साह हो वा आक्रोश मिश्रित स्वरमा दाँत कट्कटाउँदै सुस्मिता बोली। अँ अँ! म अटो पाइलटमा आउँदा एसिस्टेन्टले मलाई ब्रिफिङ गरि’सक्यो।’ कुनै नौलो कुरो नभएको जस्तो भावमा भङ्गीहीन अनुहारमा प्रति’क्रिया दियो सार्मनले।
यस वर्ष, अर्थात सन् ६०६० को साहि’त्यतर्फको नोबेल पुरस्कार सरिता शशिको उपन्यासलाई दिने निर्णय भएपश्चात नेपाली भाषामा प्रकाशित उनको पुस्तक ‘महिला र दमनचक्र’ संसारका २१६ देशमा सत्ताइस करो’डप्रति बिक्री भैसकेको थियो।
किताब छाप्न स्व’चालित यन्त्र मानवहरू अनवरत खटि’रहेका छन्। ड्रोनहरू घर घर पुस्तक वितरण गर्न उडि’रहेका छन्। यन्त्र मानवमा जडित पखेटाको माध्यमले बिजुलीको गतिमा विश्वभर पुस्तकहरू पठाइरहेको छ। मान्छेको मस्तिष्कमा जडित इन्टरनेटको सहायताले हातमा जडित स्क्रिनमा हेरेर पुस्तक पढ्न असहज मान्ने ग्राहकह’रूका निम्ति स्वचालित ध्वनी तरंग उत्पादन गर्ने मेसिनबाट समेत उपन्यास वाचन भैरहेको छ। समग्रमा सो उपन्यासले संसार’भर तहल्का पिटेको छ।
खोजमुलक र ऐतिहा’सिक पुस्तक भएको दावी लेखक, प्रकाशकको छ। सो उपन्यासमा महिलामाथि चार हजार वर्ष पहिले चरम दमन र उत्पिडन हुने गरेको दावी गरिएको थियो। तर मानव समा’जको पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध मानिसहरू भने उनको कुरामा विश्वास गरेका छैनन्।
कपो’कल्पित लेखक जसले महिलालाई वि’गतमा पछाडि पारेको झुट्टो दावी गर्दै छ, उसैलाई विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको भन्दै सरिताको आलोचना पनि भैरहेको छ।’के सरिताले लेखेजस्तै कुनै समय महिलामाथि पुरुषको उपभो’क्तावादी नजर थियो र सार्मन?’ सुस्मिता बोली।’मिस सरिताको ‘महिला र दमनचक्र’ उपन्यासलाई यस वर्षको साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार दिइएछ नि!’ उत्साह हो वा आक्रोश मिश्रित स्वरमा दाँत कट्क’टाउँदै सुस्मिता बोली।
‘अँ अँ! म अटो पा’इलटमा आउँदा एसिस्टेन्टले मलाई ब्रिफिङ गरिसक्यो।’ कुनै नौलो कुरो नभएको जस्तो भावमा भङ्गीहीन अनुहारमा प्रतिक्रिया दियो सार्मनले। यस वर्ष, अर्थात सन् ६०६० को साहित्यतर्फको नोबेल पुरस्कार सरिता शशिको उपन्या’सलाई दिने निर्णय भएपश्चात नेपाली भाषामा प्रकाशित उनको पुस्तक ‘महिला र दमनचक्र’ संसारका २१६ देशमा सत्ताइस क’रोडप्रति बिक्री भैसकेको थियो।
किताब छाप्न स्व’चालित यन्त्र मानवहरू अनवरत खटिरहेका छन्। ड्रोनहरू घर घर पुस्तक वितरण गर्न उडिरहेका छन्। यन्त्र मानवमा जडित पखेटाको माध्यमले बिजुलीको गतिमा विश्वभर पुस्तकहरू पठाइरहेक मान्छेको मस्तिष्कमा जडित इन्टरनेटको सहा’यताले हातमा जडित स्क्रिनमा हेरेर पुस्तक पढ्न असहज मान्ने ग्राहकहरूका निम्ति स्वचालित ध्वनी तरंग उत्पादन गर्ने मेसिनबाट समेत उपन्या’स वाचन भैरहेको छ। समग्रमा सो उपन्यासले सं’सारभर तहल्का पिटेको छ।
खोजमुलक र ऐतिहासिक पुस्त’क भएको दावी लेखक, प्रकाशकको छ। सो उपन्यासमा महिलामाथि चार हजार वर्ष पहिले चरम दमन र उत्पिडन हुने गरेको दावी गरि’एको थियो। तर मानव समाजको पूर्ण स्वचालित प्रणालीमा आवद्ध मानिसहरू भने उनको कु’रामा विश्वास गरेका छैनन्।
कपोक’ल्पित लेखक जसले महिलालाई विगतमा पछाडि पारेको झुट्टो दावी गर्दै छ, उसैलाई विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्का’र प्रदान गरिएको भन्दै सरिताको आलोचना पनि भैरहेको छ।’के सरिताले लेखेजस्तै कुनै समय महिलामाथि पुरुषको उपभो’क्तावादी नजर थियो र सार्मन?’ सुस्मिता बोली।’तर होइन भन्ने आधार पनि त छैन हामीसँग’ अन्यौलमिश्रित भावमा कण्ठबाट ध्वनी तरंग बाहिर पठायो सा’र्मनले।
‘मला’ई लाग्छ, यो महिला र पुरुषबीच भाँडभैलो मच्चाउन रचित कपोकल्पित उपन्यास हो। के यसका प्रमा’ण छन् त हामीमाझ?’ सुस्मिताको चिड्चिडाहट सुनेर टाइम मेसिनको बेटा भर्सनको सफ्टवेयरमा अन्तिम पटक सिस्टम टेस्टिङ गर्दाग’र्दै उसको पनि ध्यान भंग हुन्छ। आफू अगाडि रहेको क्वान्टम रोबर्टलाई बाँकी काम गर्ने इसारा गर्दै आफूसँगको अल्गोरिदम जिम्मा लगाउँदै ऊ श्रीम’तीको समिप पुग्छ।
‘हामी’सँग उसको कुरा झुटो हो भन्ने यथेस्ट प्रमाण पनि त छैन सुस्मी। फेरि उनले त पृथ्वी ग्रहको कुरा पो गरेका छन्। जो जलवायु परिवर्तनको चोट खप्न नसकेर तीन हजार वर्ष अगा’डि नै चोइटिएको र पछि कालो छिद्रमा समा’हित भएको भन्ने पनि त हामीले बुझेका छौँ होइन?’ सार्मन बोल्यो। ‘तर यसरी भ्रमित पार्ने उपन्यासले नोबेल पुरस्कार पाउनु शोभायमान छैन प्रिय!’ सुस्मिताको लवजमा उपन्या’सप्रतिको अविश्वास स्पष्ट झल्किन्थ्यो।’तिमी र म अवश्य सत्य पत्ता लगाउने छौँ’ सार्मनले दृढतापूर्वक बोल्यो।
चोरी औँलाले क्वा’न्टम कम्प्युटरले गरिरहेको प्रोग्रामिङतर्फ देखाउँदै उसले फेरि स्वरयन्त्रबाट कम्पन उत्पति गरायो ‘अब केही हप्तामै सायद हामी दुई समय परिभ्रमण गर्ने यन्त्र निर्मा’णमा सफल हुनेछौँ। तत्पश्चात हामी समय’ यात्रा गरेर चोइटिनु अघिको पृथ्वीमा पुग्नेछौँ।’
सुस्मिता मौन रहेर क्वा’न्टम कम्प्युटर जडित रोबर्टका दश हातका सय औँलाले किबोर्ड थिचेको हेरिरही। सरितालाई नोवेल पुरस्कार दिने निर्णय’को सत्रौँ दिनमा, सुस्मिता र सार्मन समय यात्रा गर्ने मेसिनमा प्रवेश गरे। एउटा गोलाकार मेसिन, जो प्रकाशको गतिको वर्गफलको रफ्तारमा विश्वको परिभ्र’मण गर्न तत्पर देखिन्छ।
मध्य युगीन जमा’नाका चक्काहरू त्यहाँ छैनन्। ड्राइभर नामधारी मानिस पनि उपस्थित छैन उनीहरूसँग। मेसि’नको अगाडि बटनहरू छन्। आकस्मिक रुपमा मस्तिष्कसँग मेसिनको कनेक्सन छुट्न गयो भने आइपर्ने भवितव्यबाट बच्न बनाइ’एका बटनहरू।
कुनै दुर्घट’नाबाट मेसिनमा खराबी उत्पन्न भए अर्को मेसिन बनाउन अल्गोरिदम्, सिउडो कोड र पिभट टेबल सहितको क्वान्टम कम्प्युटर जडित आर्टिफिसियल इन्टेलि’जेन्स तम्तयार भएर बसेको छ। सुस्मिता र सार्मन दुवै जना एउटै लाइ’नमा छन्।
ती दुई बीचको दूरीलाई अत्याधु’निक पारदर्शक वस्तुले छेकेको छ। उनीहरू एकअर्का’लाई देख्न सक्छन्। तर सुन्न सक्दैनन्। संवादका लागि उनीहरू अत्याधुनिक भ्वाइस ट्रान्सफर एयर प्रोटोकलको प्रयोग गर्दै छन्। सुस्मिताले मस्तिष्कमा जडित ध्वनी स्थान्तरण प्रवि’धिको सहायताले सार्मनलाई बोलाउँछे। सार्मनको मस्तिष्कमा जडित रिसिभरले सो आवाज ग्रहण गर्छ र उसको श्रवण्य’न्त्रसम्म पुर्याइदिन्छ। सार्मनले तुरुन्त प्रतिक्रिया दिन्छ।
यसै प्र’क्रियाले दुईबीच संवाद चल्नेगरी प्रविधिको विकास गरेकी छे सुस्मिताले। दुवै मिलेर बनाएको यो समय परि’भ्रम गर्ने मेसिनलाई उनीहरूको मस्तिष्कमा जडित कम्प्युटरको माध्यमबाट नियन्त्रण र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसमा क्वान्टम कम्प्युटर पनि सहयोग गर्न बसेको छ।सुस्मिताले सार्म’नलाई ‘तयार छौ?’ भन्ने प्रश्न गरी। प्रत्युत्तरमा सार्मनले ‘छु’ भन्ने जवाफ पठायो। उनीहरू आदिम वैज्ञानिकहरूले गरेको परिकल्प’नाअनुरुपकै मेसिन बनाएका थिए। सेतोपाटीबाट
December 2, 2020 admin समाचार 8376
रौतहटमा एक व्यक्तिको श’व फेला परेको छ । जिल्लाको माधव-नारायण नगर-पालिका वडा नम्बर ५ मिठुहवा बस्ने ५० दशै रामको श’व फेला परेको हो । उनको श’व सोही नगरपालिका वडा नम्बर ४ मान-पुरका लक्ष्मी साहको बाँस-घारीमा
November 1, 2020 admin समाचार 9986
March 28, 2021 admin समाचार 4658
सबैलाई उदाहरणीय जोडी बनेर चिनाएका अनिता खड्का र बिनोद खड्कालाइ भेट्न अस्पताल पुगेका नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रकी चर्चित गायक कुलेन्द्र बिश्वकर्मा भाबुक भएका छन। अन्तरबार्तामा बोल्दा बोल्दै उनि भाबुक भए अझ गीत गाउने बेलामा त उनको